Faah faahin:- Al-shabaab oo maanta jidka u galay kolonyo uu la socday guddoomiyaha degmada Jalalaqsi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Al-shabaab oo maanta jidka u galay kolonyo uu la socday guddoomiyaha degmada Jalalaqsi
Faah faahino dheeraad ayaa laga helayaa weerar uu maanta dhaawac fudud kasoo gaaray gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, kadib markii ciidamo ka tirsan Al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen gaari uu la socday.
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow iyo wafdi uu hogaaminaayay ayaa kasoo baxay magaalada Jowhar, waxaana ay kusii jeedeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Ciidamo ka tirsan Al-shabaab ayaa la sheegayaa in wafdigaasi ay jidka u galeen, kadibne ay rasaas ooda uga qaadeen.
Askartii la socotay guddoomiyaha ayaa la sheegayaa inay iska caabiyeen weerarka ay ciidanka Al-shabaab kusoo qaadeen kolonyadda guddoomiyaha.
Mid ka mid ah askartaasi ayaa la sheegayaa inuu halkaasi ku geeriyooday, iyadoona labo kalena ay ku dhaawacmeen,
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidankii Al-shabaab ee weerarka kusoo qaaday kolonyada guddoomiyaha ay sidoo kale dhaawacmeen, kadib markii iska caabinta ay la kulmeen ilaalada guddoomiyaha.
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa sheegay inuu caafimaadkiisa wanaagsan yahay islamarkaana aanay jirin wax weerarkaasi kasoo gaaray, balse uu ku geeriyooday mid ka mid ciidankii isaga la socday iyadoona 2 kale ay ku dhaawacantay.
Ciidankii Al-shabaab ee weerarka ku qaaday kolonyadda guddoomiyaha ayaa la sheegayaa inay dhaawacyadooda hore u qaateen, iyadoona haatan xaaladda goobtii uu dagaalka ka dhacay ay tahay mid aad u degan.